ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » I-axle iVidiyo iphakamisa ukusebenza kunye nokungahambi kakuhle kwe-Bar MAM Solutions
Ukugqwesa kwenkampani yale nyanga igxile kwelinye leenkampani ezikhulayo ngokukhawuleza, Isikrini seVidiyo. Eyasungulwa ngabadlali bezilwanyana zentengiso uSam Bogoch (CEO), uPatrice Gouttebel (uMphathi weMveliso) kunye noSteve Ryan (iNjineli yoMkhombandlela), owayesakuba ngu-SeeFile, phakathi kwe-2012, umbono wekampani ukuphuhlisa isisombululo seMAM (Media Asset Management) Iimfuno zamawaka amaninzi amaqela evidiyo amancinci asetyenziswa ukugcinwa kwabelwana.
Inkampani egcinwe ngasese iye yanda ngamanani aphindwe kabini ngonyaka, kwaye ngoku iyakubingelela abathengi be-400 kwihlabathi jikelele. I-axle ithengisa ngokuthe ngqo kubathengi, kunye nomthengisi kunye neziteshi ze-OEM. I shishini layo langaphandle kwe-100% elithengisa i-Yurophu, e-Asia naseLatin America. Inkampani yakutsha iqalise ukusebenzisana ne-OEM Avid Kwaye ngokulula, ngubani owenza isofthiwe yaso kunye nazo zonke iinkqubo zabo zokugcina eziphantsi kunye ne-midrange.
Ixesha lokuBala lokuKhanya
Ngokutsho kwe-CEO uBogoch, 'umzuzu we-aha' wafika xa wayekho Avid Ukuba neengxoxo ezininzi kunye nabaxhasi abaphezulu abavuyiswa kakhulu AvidIinkqubo, kodwa bekuninzi zisebenzisa i-subset encinci yesetyenzisiweyo esetyenzisiweyo. Ngelo xesha, i-Apple's Final Cut Server ibonise ukuba inani elincinci leendawo ezinokuthi zenzeke kwinkqubo ejoliswe ngakumbi kumaqela amancinci. Xa iComputer ivala i-Final Cut Server, yacaca ngokukhawuleza ukuba ithuba leemarike livulelwe isisombululo esithengisa isizukulwana esilandelayo esingazalisa isithuba esashiye sivulekileyo, sisebenzisa ubuchwephesha bobuchwephesha bobuchwephesha bewebhu.
Sam Bogoch; CEO Isikrini seVidiyo
Uthi uBogoch, "Sasiziva ukuba kukho amashumi ezinkulungwane zeziza ezinokuthi zizuze kule nkombululo, kubandakanywa amaqela ezemidlalo, iikoyunivesithi, imibutho, ii-arhente zesikhangiso, izindlu zonqulo, abasasazo kunye nezindlu zendlu." ??
Ukulula. Isiqulatho esicacileyo seZisombululo kunye neempawu.
Ngoku kwiminyaka emihlanu kamva kwaye yinyani kumbono walo wokunikela isicwangciso esingahlawuliyo se-software esilandelayo solawulo lwe-software 'exabiso lomntu wonke, Isikrini seVidiyo's izisombululo Yenza kube lula kakhulu kumaqela amancinci kunye nama-middle-size ukufumana nokusebenzisana namafayile abo abeendaba. Isisombululo sesebenza kunye naluphi na uhlobo lokugcinwa kweefayile ezifayili, ukuxhuma ngokungqongqo kwi-intanethi yokugcina indawo (NAS), amanethiwekhi okugcina indawo (SANs), ii-RAID kunye neenjini ezikhuni. Ikwaxhasa kwakhona iinkqubo ezininzi zokugcina indawo ezibhala nokufunda iiTO zee-tapes, umgangatho woshishino wokugcina iifayile zeendaba.
Ngokutsho kweBogoch, amaqela asebenza ngevidiyo ayenamathabhete amaninzi okugcina impahla, amaninzi kwiimoto ezikhuni, ezingenakukwazi ukucinga nokuphinda asebenzise ngendlela abathanda ngayo. Ngenxa yobuninzi beeseva ezincinci zokugcinwa kweendleko njengendlela yokuphatha iifayile ezithembekileyo kwiimoto ezikhuni, iifayile zinokufudukela kumncedisi apho Isikrini seVidiyoIsofthiwe ingakwazi ukulawula iifayili, isebenzise ukusetha ifolda yazo. Isofthiwe ayixinzezeli umsebenzisi ukujonga kwiifayile kwiindawo ezikhethekileyo, okanye ukuyilayisha kwifu. Kwaye ungawufikelela kuyo nayiphi na isiphequluli sewebhu, i-smartphone, okanye ithebhulethi. I-axle ibeka iimboniselo zeefayile ngqo kwisiphequluli somsebenzisi kwaye sinakho iphaneli yeplagi kwi-Adobe Premiere® Pro CC, kunye ne-XML ngaphandle kwe-FCP 7 kunye ne-X.
Zonke iinkqubo ze-axle ziyahambelana ne-Adobe (Premiere Pro, Prelude) kunye ne-Apple (Final Cut Pro 7®, Final Cut Pro X®) Abahleli. Uqwalaselo olukhethekileyo olongeza ukuhambelana kwi-Adobe Naphi na kwaye Avid Umqambi weMedia / Symphony workflows nazo ziphuhliso. "Isofthiwe yethu yenza nayiphi na iqela livelise ngakumbi ngokukhawuleza," kuqhubeka uBogoch. "Yenza zonke iifayile zogqirha kwi-server ziphengululwe, zikhange ikhutshwe kwii-standard standard devices, kunokuba zifake izitishi zokuhlela, kwaye zikulungele ukusebenzisana, ukungena ngemvume nokuhlaziywa nokuvunywa. Isofthiwe ingafakwa kwisithuba esingaphantsi kweyure, kwaye phantse akukho qeqesho olufunekayo kubasebenzisi. "??
I-2017 i-axle yamaqela amancinci nee-medium-size
I-software yakutsha ye-software eyenza i-2017 isebenza kumncedisi kwinethiwekhi ye-studio kwaye isebenza njengesithuba sokugqibela sokukhangela kunye nokusebenzisana nesiphequluli. I-2017 i-axle ilungiswe kwiilayibrari zentengiso kunye ne-2 yezigidi kunye ne-asethi. Xa kusebenza, abasebenzisi bamane bekhomba i-axle kwiifayile zeendaba ezifuna ukulawula kwaye ngokuzenzekelayo zidala ama-proxies aphantsi-bandwidth angakwazi ukufikelela kuyo nayiphi na isiphequluli sewebhu. Ukusebenzisa isicatshulwa sayo esibonakalayo sesiphequluli, kulula ukukhangela, ukuphawula, ukumakisha, ukuvuma, nokuchaza iifa kwiindawo.
Njengazo zonke i-suites ze-software, ukugcinwa kungaba yi-SAN, i-NAS okanye nje i-RAID yendawo, kwaye iyakwazi ukusebenza kwi-Mac, Windows okanye i-Linux; Zonke iimfuno ze-axle ukukwazi ukufunda inkqubo yefayili. I-2017 i-axle iquka iphaneli entsha yokupakisha kwi-Adobe Premiere Pro CC, eyenza abahleli ukuba bafune, bonani ukuhlola kuqala kwaye baqale ukusebenza ngezithombe ngaphandle kokushiya isofthiwe yabo ye-NLE eyintandokazi. Ukongeza, i-axle 2017 idibanisa kalula neminye imikhiqizo yenkampani efana ne-axle Hlela, umhleli onqamlekileyo we-iPad kunye ne-iPhone, kunye nezicelo zenkampani yesithathu ezifana ne-Firefly kwiimfuno zamaphepha-ntengiso ezisetyenzisiweyo.
Inzuzo enkulu yokusebenzisa i-axle i-2017 iyakwazi ukufumana ngokukhawuleza iphinde isebenzise imifanekiso eqhoshayo. Ezinye iinkalo ziquka ukukwazi ukudala izicatshulwa kunye nokuhanjiswa kwezixhobo zeendaba zakho ngaphandle kokusebenzisa umsebenzi we-NLE, ukukwazi ukuphonononga nokuvuma imifanekiso esuka kwiindawo ezikude, kunye nokukwazi ukuthayipha imifanekiso yabanye kwiqela lakho ukukhangela kamva.
I-Axle VideoI-Sauce eyimfihlo
Ukuhlanganiswa okunamandla kule nkqubo kunye nokukwazi ukubonisana ngokulula kumsebenzi wesithathu kunika i-axle platform inzuzo ehlukeneyo ngaphandle kwezinye izisombululo. Ngaphandle kweshishini layo elikhokelela ekufikeleleni (i-Starter ilayisensi yomsebenzisi ezimbini iqala kwi $ 495; i-2017 ilayisensi yomsebenzisi ezimbini iqala i $ 1,295), isisombululo sesofthiwe yonke into elula yokusebenza ngokubhekisele kwezinye iinkqubo ze-MAM ezinzima. Inyaniso yokuba ayithathi ukulawula isistimu yefayile ivumela abasebenzisi ukuba basebenzise zonke izakhiwo zefolda kunye nemisebenzi yokusebenza esele bajwayele. Kwakhona kuthetha ukuba ukufaka i-axle kulula kakhulu kunokufaka i-MAM, kwaye abasebenzisi banokutshintsha ingqondo yabo kamva ngaphandle kwengozi yokungena.
Iziphakamiso ezikhuphisanayo Isikrini seVidiyo
Xa ebuzwa malunga nokuncintisana kwe-axle, uBogoch wathinteka, "Ukhuphiswano lwethu oluphambili alukwenzi lutho, kwaye uhlala kunye neendlela zobuchule ezifana ne 'sneakernet' ?? Apho abantu bathuthukisa imidiya phakathi kwamashishini kwiimoto ezikhuni. Iikhompyutheni eziphambili apha ziyi-Post-it amanqaku okanye iifayile ze-Excel ezisetyenziselwa ukuchonga ukuba yiyiphi imidiya ekuqhutywe kuyo, kwaye ibenokuyichukumisa ukukrazula phantsi kwendlela. Kwesinye isiqhelo, kukho iinkqubo ezixubileyo zeMAM ezinje AvidI-Interplay kunye neMedia Central, i-Square Box ye-CatDV, Cantemo I-Portal, Amanqanaba angaphaya kweeInjini, njalonjalo. Ezi zisombululo zibiza amaxesha amaninzi ukuba yintoni i-axle eyenzayo, kwaye inike amaxesha amaninzi ubunzima, kokubili ukufakela nokugcina ukuqhubeka komsebenzi. Ngokungafani ne-axle, ngokuqhelekileyo bathatha ukulawula apho imidiya igcinwa kwinkqubo yefayile yomthengi, nto leyo eyenza ibe yinto ebalulekileyo yokuhamba ngeendlela ezithile. "??
Axile ai. I-Plutform ye-Artificial Intelligence Platform ye-Media Management.
Ukungahlali kwii-laurels zayo, i-axle iyaqhubeka nokuphakamisa ibha yezobuchwepheshe eziphazamisayo, ngoku kutshatyalaliswa ngokutsha kwayo, i-axle ai (Ubungcali bobuchule), ukuhlalutya kweendaba kunye nophuhliso lwesiganeko, kunye nesixhobo sayo esilandelayo. Amaqela okuvelisa i-post ngoku angabona ukugcinwa kwexesha elidlulileyo elinokuthi lichithwe ngenye indlela ukubeka amanqaku abo ngokubhaliweyo, kwaye banokuzuza ngokukwazi ukufumana imidiya engenakulawulwa kuyo yonke into, ngokuqhelekileyo nje ngeefayile zeefayile ezinamagama amaninzi ezivela kwiidiya zekhamera.
I-axle ai inceda amaqela e-postproduction campaigns ngokugqithiseleyo umsebenzi onzima wokungena kwi-metadata enzulu malunga nayo yonke indawo. Kunoko, abasebenzisi bamane bakhethe isakhelo esivela kwividiyo, okanye babambe umfanekiso ukusuka kunoma yimuphi umthombo weskrini kuquka namaphepha ewebhu. I-axle ai iyakwazi ukuchonga ngokukhawuleza uluhlu olukhethiweyo lwevidyo zemidiya, kunye neziqendu ezichanekileyo kulezo ziqhotyoshelwano, eziqulethwe zihambelana nomfanekiso.
Ukuqwalaselwa kokuqala kokuthunyelwa kwamandla ukuhambisa lo mbane yinkampani ye-axle ai, edibanisa isofthiwe ye-axle kunye nenkqubo yenkqubo yomnxeba eneendlela eziphezulu kakhulu ezilungiselelwe ukuqhuba ukukhangela kwevidiyo kunye nokuhlaziywa kwe-algorithms. I-axle ai platform yenzeke ngokubanzi ukubandakanya ii-injini ezongezelelweyo kunye nefu ngelixesha elizayo, kwaye zenzelwe ukubonelela ngeyona ndlela eyona nto ifumanekayo kwisixhobo sokuhlaziywa kweendaba. Ngaphezu koko, ukudibanisa i-axle ne-axle i-2017 izisa ukuveliswa kwemethadatha ngokuzenzekelayo, ukuveliswa ngokukhawuleza, kunye nemisebenzi emitsha yokukhangela imithombo yeendaba kunye nokuphinda iphinde isebenzise ububanzi beengcali zevidiyo.
Ukongezwa kweBogoch, "I-axle ax ai iyenze inkokeli yoshishino ekusebenziseni ngokuzenzekelayo, apho ungasayi kubeka uphawu okanye ukuloba izinto ukuze ufumane ngokukhawuleza. Ukuphumelela kwangempela. Siyakhele njengeplanethi evulekileyo kwaye silindele ukusebenzisa inzuzo eninzi kwiinkampani ezibanzi kunye neenkonzo zefu njengeGoogle kunye ne-MS Azure, ngubani oza kwandisa ukufundisa kwabo okuzodwa okuxubileyo kumxube. "??
Ekugqibeleni, uBogoch wabelane ngombono wakhe apho ebona amathuba okukhula kwenkampani. "Iyokuqala kusetyenziswa ingqiqo yolwazi kunye nobuchule bokufunda obude ukwenza ulawulo lweendaba lulula kwaye lunembile kunokuba ludlulileyo. Akuyona nje indlela ephakamileyo yokuxhobisa amaqela evidiyo, kodwa iyakususa imfuno yezinto ezininzi eziphambili zokumakisha kunye nokungena ngemvume okunqamene nokusetyenziswa kweenkqubo zolawulo lweendaba kwixesha elidlulileyo. "
Olunye ithuba lokukhula alubonayo lukwimixholo eyenziwe ngumsebenzisi, kwaye indlela ecaleni phantse wonke umntu uba ngumdali womxholo. UBogoch uqaphela ngokucacileyo ukuba iimveliso, iziganeko kunye nemibutho yazo zonke iintlobo ngoku zifuna iindlela zokwenza lo bugcisa, kunye kunye nalo thuba liza kuyimfuneko yokwenza uluhlu kunye nokukhangela onke amashishini amasha. "Sicinga ukuba oku kuvuleleke kakhulu kwizixazululo zethu ezilula." ??
Xa sele ndiye kwishishini ukususela ekupheleni kwe-70s, ndibone isabelo sam seenkampani zithatha 'i-hyperbole' ngaphandle kwesango, kwaye ziyekezela ukuphela kwelanga emva kwangoko. Ngokuchaseneyo, Isikrini seVidiyoIsabelo sokwandiswa kweemarike sisigqibo somsebenzi oqhubekayo wekhampani ukuqhubelela ezintsha izinto zokutsha kwamakhasimende ngenkqubela phambili ubukhokeli babo bezobuchwepheshe ukuhlakulela ngokulula okulula kunye nokuhlawulekayo, okwenza iisombululo ze-MAM zisebenzise kangcono isiseko sabathengi esakhulayo. Ngaphezu koko, ndiyakwazi ukubona i-axle kunye nokuguquka kwayo okungenakukuphelisa kubangela ukuphazamiseka kwiinkalo ezininzi zeemarike ngaphaya kwe-M & E. Le yinkampani endiya kuyenza iliso. Kufuneka nawe.
Adobe Kukubhadla okungeyonyani Avid XLUMX Ukunciphisa i-bitrate H264 / H265 eye HDR / WCG HEVC Immersive ukudityaniswa MAM Lawulo lweefa Ukunciphisa ingxolo Imveliso yokuposa UHD / 4K / HD Injini yeVidiyo Ukuveliswa kweVidiyo	2017-07-10
Previous: I-Canon C200: I-Cinema RAW Light, Ayikho Inkinga!
next: I-Pebble Beach Systems kwi-IBC 2017
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "I-video ye-axle iphakamisa ukusebenza kunye nokungahambi kakuhle kwe-Bar MAM Solutions". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/axle-video-raises-performance-and-affordability-bar-for-mam-solutions/. Enkosi.